हामीले आफ्नाे लागी सही निर्णय कसरी लिने ? - ज्ञानविज्ञान
हाम्राे जिवन हाम्राे निर्णयहरूकाे थुप्राे हाे । हामी बिच हरेक काममा, हरेक परिस्थितिमा, हरेक दिनमा, हरेक पलमा विकल्पहरू हुन्छन्। ति विकल्पहरू मध्येबाट हामीले गरिने निर्णयले नै हाम्राे जिवनकाे यात्रा अगाडी बढिरहेकाे हुन्छ ।
आफ्नाे लागी कसरी लिने सही निर्णय ?
सबैभन्दा पहिले आफ्ना विकल्पहरू हेर्नुहाेस् । तपाइसँग कतिवटा र कस्ता विकल्पहरू छन् भन्रे चिन्रुहाेस् । मन धेरै चँचल नबनाउनुहाेस् । सबैभन्दा प्रभावकारी हुनसक्ने विकल्पहरूकाे बारेमा मात्र साेच्नुहाेस् । आफ्नाे दिमागमा चलिरहेका कुराहरू र ति विकल्पहरूका बिच तुलना गर्नुहाेस् ।
अब ति विकल्पहरूलाइ क्रमबद्द तरिकाले आफ्नाे दिमागमा सेट गर्नुहाेस् या डायरीमा लेख्नुहाेस् । तपाइले आज राेज्ने विकल्पले तपाइलाइ भाेलीकाे दिनमा अगाडी बढ्न सहयाेग गर्छ कि गर्दैन ? यदि तपाइले आज लिनुभएकाे निर्णयले भविष्यमा तपाइलाइ कुनै सहयाेग गर्दैन भने आज त्याे विकल्प राेज्नुकाे अर्थ रहँदैन ।
त्यसैले तपाइसँग भएका ति विकल्पहरूलाइ आफ्नाे भविष्यसँग जाेडेर हेर्नुहाेस् । ति हरेक विकल्पलाइ आफ्नाे लक्ष्यसँग मिलाएर हेर्नुहाेस् । निर्णय लिदा आफ्नाे खुसीलाइ पनि प्राथमिकतामा राख्नुहाेस् । यदि आज तपाइले आफ्नाे खुशीलाइ बेवास्ता गरेर अरूकाे खुशीकाे लागी निर्णय लिनुहुन्छ भने, त्यसले तपाइलाइ दिनप्रतिदिन भित्र भित्रै मार्नेछन ।
भविष्यमा पछुताे हुनेछ । त्यसैले ति विकल्पहरूमा आफ्नाे खुसी खाेज्नुहाेस् । आफ्नाे कमजाेरी, क्षमता, अवसर र चुनाैतिकाे बारेमा विचार गर्नुहाेस् । आफ्नाे भविष्यसँग पनि मिल्दाे र खुशी पनि भेटिने निर्णय लिदा त्यसलाइ कार्यन्वयन गर्नकाे लागी आफुलाइ तयार पार्नुहाेस् ।
‘मैले यस्ताे गरेकाे भए हुनेथियाे’, ‘यस्ताे भइदिएकाे भए’ जस्ता साेच कहिल्यै नराख्नुहाेस् । उचित निर्णय लिनकाे लागी ढिला भएकाे छैन, कहिल्यै ढिला हुँदैन । र, यदि तपाइले आफ्नाे निर्णय फेर्ने अवस्था छैन भने आफ्नाे पुरा निर्ययलाइ कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्रे याेजनामा लाग्रुहाेस् ।
यस राेगकाे बारेमा पनि जान्रहाेस्ः
कतिपय व्यक्ति मानसिक समस्यालाई सोझै पागलपनसँग दाँजेर पारिवारिक मान प्रतिष्ठामा आँच उत्पन्न गराउन सक्ने ठान्छन् ।
कतिलाई त यस्ता समस्याहरूको आधुनिक चिकित्सा प्रणालीद्वारा उपचार सम्भव छ भन्ने पनि थाहा र विश्वाश छैन र धामी झाँक्रीको शरणमा जाने गर्दछन् । समस्या ठीक नभएमा या बढ्दै गएमा त्यस्ता व्यक्तिलाई बाँध्ने, शारीरिक तथा मानसिक यातना दिने जस्ता घटनाहरू त छापाहरूमा बेलाबेलामा प्रकाशित भइ नै रहेका हुन्छन् ।
शारीरिक लक्षणमा मुटु काप्ने, श्वास फेर्न गाह्राे अनुभव हुने
यदि तपाईंलाई कसैले एक्कासी आक्रमण गर्न खोजेमा वा अन्य कुनै कारणले खतरा महसुस भएमा मन र शरीरमा एक्कासी परिवर्तन आउँछ र मन डराउँ । तपाईंको अवचेतन मस्तिष्कले केही गर्न नसकेको सोच्छ र यस्तो सोचाई मनमा आउनासाथ मांशपेशी कडा हुन्छन् र यसले तपाईंलाई आफ्नो प्रतिरक्षा गर्न या भागेर आफूलाई जोगाउन तयार पार्छ ।
लगातर आत्तिने रोग
एक्कासी आत्तिने रोग
Don't Miss it यस्ता बानीले गर्दा तपाइ भविष्यमा पछुताउनु पर्नेछ, जान्रुहाेस्
Up Next जाडाेमा रूघाखाेकी अर्थात् चिसाेका राेगहरूबाट यसरी जोगिनुहाेस्
सुन्दा अचम्म लाग्ला तर कुरा यहि साँचाे हाे । हरेक बिहान खाली पेटमा कागती पानी पिउँदा यसरी फेरिन्छ शरिर, आजै सुरु गर्नुहोस्
हामी सबैलाई थाहा छ, मानिसको शरिरले भिन्न किसिमका रसायनहरुमा भिन्न किसिमले प्रतिक्रिया दिन्छ । कुनै पनि रसायन हाम्रो शरिरमा निश्चित…
खाना त हामी जहिले खान्छाै तर हप्तामा एक दिन भोकै बस्दा नसाेचेकाे फाइदा पउनुहुन‍े । एकचाेटि अपनाउनुहास्
उचाई अनुसार कति तौल उत्तम हुन्छ ? तपाईँ मोटो हुनुहुन्छ या दुब्लो, यसरी पत्ता लगाउनुहोस्
हिजोआज मानिसहरु आफ्नो शरीरको तौलको विषयलाई लिएर धेरै चिन्तित हुन थालेका छन् । कतिपय मानिसहरुको तौल उचाई अनुसार मिल्दैन ।…